Bangladesh စက်ရုံနှင့်ထုတ်လုပ်သူများအတွက် China Raw white 50/2 polyester အပ်ချုပ်ချည်ထုတ်လုပ်သူ ရက်ကန်း
ထုံးစံသဘာဝဖိုင်ဘာ Eco-Friendly Cannabis sativa 10 ...
ပန်းထိုး ဦး ထုပ်အမျိုးသမီးများနွေ ဦး နှင့်နွေရာသီနေရောင်ကာကွယ်ရေး ...
poly poly core အပ်ချုပ် Thread 40/2
လက္ကားအပ်ချုပ်ပစ္စည်းများ 44/2 100% poly အပ်ချုပ်ချည်
Hilo က de coser 42/2 polyester အပ်ချုပ်ချည်
Ne 40s /2white 100% hilo poliester polyester ကြိုး
ကုန်ကြမ်းဖြူ 50/2 polyester အပ်ချုပ်ချည်ထုတ်လုပ်သူ ...
စိတ်ကြိုက်အသေးစား MOQ လွင်ပြင်လက်ဆောင်တစ်ခုမြှုပ်ကွက် Trucker ဦး ထုပ် ဦး ထုပ်
Bangladesh အတွက်ဖြူသောအဖြူ ၅၀/၂ polyester အပ်ချုပ်ချည်ထုတ်လုပ်သူ
မြင့်မားသော tenacity, မြင့်မားသော tenacity, အနိမ့်ကျုံ့, Anti-Pilling, Knotless
polyester အပ်ချုပ်ချည် 50/2
ကုန်ကြမ်း / optical / အရောင်ချွတ်အရောင်အဝါနှင့်ဆိုး
သိုးမွှေးထိုးခြင်း၊ ရက်လုပ်ခြင်း၊ အပ်ချုပ်ခြင်း၊ အဝတ်အထည်၊ လက်အိတ်၊ ဦး ထုပ်၊ အိပ်ရာခင်း
တစ်လလျှင် 1200 Ton / Tons မြင့်မားသော tenacity
၁.၅ ကီလိုဂရမ် / ပလပ်စတစ်ကန်တော့စက်တစ်လုံး၊ ၁၆ လုံးကန့် / စက္ကူအိတ်သို့မဟုတ်ပုံးတစ်ခု၊ ၁.၆၇ ကီလိုဂရမ် / စက္ကူစက်တစ်လုံး၊ ၁၅ ကောင် / စက္ကူအိတ်၊ ၂၅ ကီလိုဂရမ် / စက္ကူအိတ်၊ 1.4175kgs / စက္ကူကန်တော့ချွန်, 16cones / စစအိတ်, 22.68kgs / စစအိတ်; 1.89kgs / စက္ကူကန်တော့ချွန်, 12cones / pp အိတ်, 22.68kgs / စစအိတ်။ သို့မဟုတ်ဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်အရအခြားထုပ်ပိုးမှုများ။
TIanjin, Qingdao, Shanghai, Ningbo, မည်သည့်တရုတ်ဆိပ်ကမ်းမဆို
100% Polyester ကြိုး 10 / 1,20 / 1,30 / 1,40 / 1,50 / 1,60 / 1
အပ်ချုပ် Thread 10 / 2,20 / 2,30 / 2,40 / 2,50 / 2,60 / 216 / 2,24 / 2,32 / 2,42 / 2,45 / 2,52 / 2,62 /210 / 3,20 / 3,30 / 3,40 / 3,50 / 3,52 / 3,60 / 3,62 /310 / 4,20 / 4,20 / 6
Poly / Poly Poly / လဲမှို့ 19/2 / 3-29 /2/ 3-30 / 2-32 / 2-40 / 2-45 / 2-53 / 2-60 / 2
ဖိုင်ဘာ Semi-Dull 353 / 50D, 100D, 150D, 50D, 100D အတွက် 100% တောက်ပသော Yizheng Fiber 17K100% Huaxi Cun Fiber
အရည်အသွေး TFO (Two For One) နှင့် Ring Twist
အရောင် အဖြူရောင်ကုန်ကြမ်း၊ Optical White၊ အဖြူရောင်ဖြူ၊ အနက်ရောင်အားလုံးသည်အရောင်များ
စရိုက်လက္ခဏာတွေ အပူပေးစက်၊ လေအေးပေးစက်၊ အသိမရှိ၊ မြင့်မားသောတည်မြဲမှု၊ ကောင်းစွာစက်ချုပ်ခြင်းလုပ်ဆောင်ချက်၊
လျှောက်လွှာ အ ၀ တ်အစား၊ အ ၀ တ်အစား၊ အ ၀ တ်အစား၊ လက်အိတ်၊ ဦး ထုပ်၊ အိပ်ရာခင်း၊ စောင်၊
ထုပ်ပိုး ၁.၆၇ ကီလိုဂရမ် / စက္ကူကန်တော့စက်၊ ၁၅ ကီလိုဂရမ် / စက္ကူအိတ်၊ ၂၅ ကီလိုဂရမ် / စက္ကူအိတ် ၁.၄၁၇၅kgs / ပလပ်စတစ်ပြွန်၊ ၁၆ လုံးသေတ္တာ၊ ပုံးတစ်လုံး၊ ၂၀GP အတွက် ၂၂.၆၈ ကီလိုဂရမ်၊
ထုပ်ပိုး & တင်ပို့မှု
Weaver Imp & Exp Co. , Ltd ။ အထည်အလိပ်ထုတ်ကုန်များ၏အပြောင်းအလဲနဲ့ရောင်းအားဖွံ့ဖြိုးသောထုတ်လုပ်သူ & ကုန်သွယ်ကုမ္ပဏီဖြစ်ပါတယ်။
အရင်က Hebei Hengshui Yuanda Group ဖြစ်သည်
Imp ။ & Exp.Co.LTD. ဤသို့သောပြုပြင်ထုတ်လုပ်ခြင်းကဲ့သို့သောပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းနည်းလမ်းများအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်များနှင့်ဒေသများသို့တင်ပို့သည်။ ယူကေ၊ ကိုးရီးယား၊ ယူအေအီး၊ ဗီယက်နမ်၊ ဘရာဇီး၊ စပိန်၊ မလေးရှား၊ , ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှ, ဂွာတီမာလာ, တူရကီ။
ကျွန်ုပ်တို့သည်အမြဲတမ်း“ ဖောက်သည်သည်ပထမ ဦး ဆုံး” ဖြစ်ပြီးစျေးကွက်ကို ဦး တည်သည်။ စီးပွားရေးအရအဓိကကျသည့်စီးပွားရေးစွမ်းရည်၊ စဉ်ဆက်မပြတ်စီးပွားရေးမဟာဗျူဟာကိုချိန်ညှိခြင်းနှင့်စီးရီးထုတ်ကုန်ရောင်းအား၏လမ်းကြောင်းကိုအောက်ပါ။ ကျနော်တို့အထွေထွေလည်ချည် poliester အပ်ချုပ်ချည်မှစတင်, တဖြည်းဖြည်း pp သို့မဟုတ် pc cored ချည်, ဝါဂွမ်းအပ်ချုပ်ချည်, မြင့်မားသော tenacity ကြိုးနှင့်အထည်များတွင်ပါဝင်ပတ်သက်ခြင်းနှင့်ကြီးမားသောရိတ်သိမ်းရရှိခဲ့ပါပြီ။ ကျနော်တို့ပြည်တွင်းနှင့်ပြည်ပရှိစီးပွားရေးမိတ်ဆွေများနှင့်အတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်မျှော်လင့်ခြင်း, အောင်မြင်ရန် ကြီးစွာသောအနာဂတ်ဖန်တီးရန် Co- ကြွယ်ဝမှု
၁။ စက်ရုံစျေးနှုန်း။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အမြန်ဆုံးပို့ဆောင်ခြင်းနှင့်အတူအပြိုင်အဆိုင်အများဆုံးစျေးနှုန်းကိုကမ်းလှမ်းသည်။
၂။ အတွေ့အကြုံကြွယ်ဝသော - ၂၅ နှစ်ကျော်လည်ပတ်ထားသော polyester အပ်ချုပ်ချည်မျှင်အတွေ့အကြုံ။ ငါတို့သည်သင်တို့ကိုပရော်ဖက်ရှင်နယ်, အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့နှင့်စဉ်းစားဟန်ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်ပါတယ်။
၃။ အရည်အသွေးအသိအမှတ်ပြုခြင်း - ကုန်ပစ္စည်းများအားလုံးကိုဆိပ်ကမ်းသို့မတင်ပို့မီစစ်ဆေးထားပြီးအကောင်းဆုံးနှင့်တည်ငြိမ်သောအရည်အသွေးကိုကျွန်ုပ်တို့အာမခံနိုင်သည်။
4. အဆင့်မြင့်ပစ္စည်း - အပ်ချုပ်ချည်အရည်အသွေးကိုသေချာစေရန်တင်သွင်းထားသောအလိုအလျောက်လေဆာ ၆၀ ကျော်၊ တရုတ်နိုင်ငံ၏အကောင်းဆုံးဖိုင်ဘာ၊ TFO လိမ်။
၅။ ကျွန်ုပ်တို့သည် COATS နှင့် A&E တို့၏ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူဖြစ်ပြီးနာမည်ကောင်းရှိသည်။ ငါတို့သည်သင်တို့နှင့်အတူပူးပေါင်းရန်အခွင့်အလမ်းရှိသည်မျှော်လင့်ပါတယ်။
နောက်တစ်ခု: ထုံးစံသဘာဝဖိုင်ဘာ Eco-Friendly ဆေးခြောက် sativa 100% Hemp ပန်းအားကစား Caps ဘေ့စ်ဘော ဦး ထုပ်
Polyester အပ်ချုပ် Thread 50/2
polyester 42/2 Hilo က de coser
Semi မှိုင်း poliester Linhas costurar 44/2 အတွက် ...
ဆိုးဆေးချည် 44/2 100% poliester အပ်ချုပ် threa ...
လက္ကားအပ်ချုပ်ပစ္စည်းများ 44/2 100% poly အပ်ချုပ် ...